I-Sea View Flatlet - I-Airbnb
I-Sea View Flatlet
I-Sea View Flatlet e-Dolphin View ihlehlisiwe ukusuka endlini enkulu futhi inombono wolwandle ukusuka efasiteleni elikhulu lokulala. Isikhathi esiningi ngitholakala ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo. Kukhona indawo ethandekayo eseduze nephuli esimweni sezulu esimnandi esivumela izivakashi ukuthi zithole ukudla noma ingilazi yewayini zivele ziphumule ukubuka ulwandle. Izimoto zipakwe ngemuva kwesango elilawulwa kude. Eduze nenxanxathela yezitolo ezinkulu ezimbili zezidingo zakho zokudla kanye nezindlu ezimbalwa zokudlela.
Siyaziqhayisa ngendawo yokubhukuda ethandekayo nendawo ye-barbeque yezivakashi ezibhalisiwe. Ukusuka endaweni yokubhukuda ungabuka abatshuzi bezama amanzi phansi ngezansi. Kunezinyathelo ezimbalwa ezansi eyunithi kodwa kukhona ama-hand rails yonke indlela eya phansi. Kunezinja kule ndawo ezihlala nomniniyo isikhathi esiningi.
I-Heidis Coffee Shop iyindawo ekhethekile yokuma futhi udle ukudla kwasekuseni noma ngenye indlela nje ukuze uthole ubumnandi bese uphuza inkomishi yetiye kanye nezibiliboco ezibhakwa ekhaya ezibhakwa emagcekeni. I-Lords and Legends, indawo yokudlela ephambi kolwandle iyindawo yokudlela yomndeni ethandekayo ebheke ulwandle. I-African Peninsular iyiretshurenti ethandekayo ye-A La Carte eqhele ngebanga elingangemizuzu emibili ukusuka eyunithi futhi ibheke amabreaker kuyilapho ukwazi ukujabulela ukudla kwakho. Nakanjani kuwufanele ukuvakashelwa.
Isikhathi esiningi ngitholakala nganoma imiphi imibuzo noma izeluleko ongase ufune ukuthola ngazo. Kukhona nezincwajana kulolu phiko ezizokusiza ekwenzeni ukukhetha kwakho ezokuzijabulisa kube lula ngenkathi uhlezi oGwini lwethu oluhle lwaseMpumalanga lapha eBrighton Beach eBluff.
Isikhathi esiningi ngitholakala nganoma imiphi imibuzo noma izeluleko ongase ufune ukuthola ngazo. Kukhona nezincwajana kulolu phiko ezizokusiza ekwenzeni ukukhetha kwakho ezokuzij…